ဘရင်းန် တွေက ပြောတဲ့ အရောင်တို့ အကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ဘရင်းန် တွေက ပြောတဲ့ အရောင်တို့ အကြောင်း
ဘရင်းန် တွေက ပြောတဲ့ အရောင်တို့ အကြောင်း
Posted by ムラカミ on Jan 18, 2013 in Business & Economics, Creative Writing, Marketing | 19 comments
Branding Color theory
မင်္ဂလာပါ ပိတ်သတ်ကြီးရေ …။ ဒီတခါ Branding ဘက်နည်းနည်း သွားချင်လို့ပါဗျာ…။
Theory တွေ Strategy တွေ မရေးချင်လို့ Brand တွေရဲ့ Physical image ဖြစ်တဲ့
Logo တွေ ၊ Packaging တွေမှာ သုံးတဲ့ အရောင်တွေက ပြောတဲ့ စကားတွေကို
ဘာသာပြန်ချရေးရင်း ကိုယ်ထင်တာ ကိုယ် ပေါင်းစပ်ရေးသားလိုက်ပါတယ်ဗျို့…။
Brands တွေဟာ သူတို့ဟာ သန်မာသော စွန့်စားသော ပြင်းပြသော အသွင် ကိုဆောင်ချင်ရင် အနီရောင် ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
What it means: တကယ်တော့ အနီရောင်ဆိုတာ စွမ်းရည် နဲ့ ပြင်းပြမှု ကို အဓိပ္ပါယ် ဆောင်ပါတယ်။
သည်တော့ စိတ်လှုပ်ရှားမှု ၊ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားမှု နဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုတွေကို
Which brands use it:
ဗြိတိသျှ လုပ်ငန်းစု Virgin Group ဟာ အနီရောင်သုံးတဲ့ brands တွေထဲမှာ အကြီးဆုံးနဲ့ အင်အားအကောင်းဆုံး
ထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တည်ထောင်သူ Sir. Richard Branson ဟာ အနီရောင်ရဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု
စွမ်းအင်ပြည့်ဝမှု တွေကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲ ဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိတဲ့ သိပ်ကို smart ဖြစ်တဲ့ လူပေါ့ဗျာ။
Coca-Cola ကလည်း အနီရောင်နဲ့ ပါတ်သတ်လာရင် မေ့ထားလို့ မဖြစ်တဲ့ တခြားသော big brand
ဖြစ်နေပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကတော့ ပြင်သစ် ဖိနပ်brand Christian Louboutin SA ဟာ ဖိနပ်အောက်ခံပြား
တွေပေါ်မှာ အနီရောင် ခြယ်သမှု trademark ကို Yves Saint Laurent ကို တရားစွဲဆိုပြီး အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အထိ
အနီရောင်အတွက် ပြိုင်ဆိုင်မှု က ပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။
ကျနော့် ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကို ပြောပါ ဆိုရင်တော့ အနီရောင်နဲ့ ပါတ်သတ်လို့ ၃ခု မြင်သဗျ…။
ပထမတခုက Ferrari ပါ။ Ferrari ဟာ အဝါ အနက် နဲ့ ငွေမင်ရောင်ကားတွေလည်း ထုတ်ပေမယ့်
Ferrari ဆို နီမှ လို့ ပြောရလောက်အောင် .. Ferrari Red ဟာ နာမည်ကျော်လှပါတယ်။
ဒီထက် ဖျော့ရင် Pink-red ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဒီထက် oxydated ဖြစ်လွန်းရင်လည်း ကြက်သွေးဘက်
ပါသွားမှာဖြစ်လို့ ..လက်ရှိ အနီကပဲ သူတို့ရဲ့ trademark အနေနဲ့ သီးသန့် ဖြစ်တည်မှု
ဒုတိယတခုကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ချစ်လှစွာသော အိမ်နီးချင်း ချီးနား က အကြောင်းပါ။
သူတို့လူမျိုးက အနီရောင်ကို ကျက်သရေ မင်္ဂလာ အရောင်အဖြစ် သတ်မှတ်လက်ခံထားကြတာကလား။
ဆိုတော့ သူတို့ လက်ရှိ အလံကို လုပ်တော့ ဒီဇိုင်နာတွေ အပ်ကြသပေါ့ဗျာ …။ ထိုစဉ်က သူတို့ရဲ့
ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဥက္ကဌ ဂီးဆောင်ဂျောင်း ကို အနီရောင် (အနုအရင့်ပေါ့လေ ဘိုလို ဆိုရင်တော့ hue
ခေါ်မလားမဆိုနိုင်)၃၂ရောင် ဆက်သပြီး တခု ရွေးစေပါသတဲ့…။
ဂီးဆောင်ဂျောင်းက အနီရောင်နံပါတ်-၂၁ ကို ရွေးချယ်ပါသတဲ့ ..။
နောက်ဆုံးတခု ပြောချင်တာကတော့ အားကစားနယ်ပယ်မှာ ခင်ဗျ…။
အပူရောင်လို့ ခေါ်တဲ့ အရောင်တွေ ဝတ်ဆင်တဲ့ အားကစားသမားတွေက
အအေးရောင်တွေ ဝတ်တဲ့ အားကစားသမားတွေထက် ပိုမို ပေါက်ကွဲအား
ကောင်းတတ်ကြပါသတဲ့ …။ ကမာ္ဘ့ဘောလုံးလောက ကိုဥပမာထားကြည့်ရင်ဖြင့်…
လက်ရှိ ကမာ္ဘ့ အဆင့်-၁ စပိန်အသင်း အနီရောင်ဝတ်တာ.. ၊ ကမာ္ဘ့ အဆင့်အမြင့်ဆုံး
ဘောလုံးရပ်ဝန်းဖြစ်တဲ့ ဥရောပ တလွှားက ဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲအသီးသီးမှာ
အနီဝတ်တဲ့အသင်းတွေ ထိပ်တန်းက ရပ်တည်တတ်တာ တိုက်ဆိုင်မှု သက်သက် လို့ တော့
မထင်မိဘူးဗျ။ (Real Madrid လို ချွင်းချက်အသင်းတွေလည်း ရှိသပေါ့လေ…)
Brands တွေဟာ ငယ်ရွယ်ပျိုမြစ်မှု နဲ့ မိခင်ကမာ္ဘမြေကို ချစ်မြတ်နိုးမှု ကို ပြသလိုတဲ့ အခါ အစိမ်းရောင် ကို သုံးကြပါတယ်။
အစိမ်းရောင်ဟာ ငွေကြေး ဒါမှမဟုတ် အားကျစရာကောင်းမှု ကို ပြသလို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နဲ့
မိခင်ကမာ္ဘမြေကိုလည်း ကိုယ်စားပြုပါသတဲ့ ..။ ဆိုတော့ နုနယ်ပျိုမြစ်မှု ထာဝရတည်တံ့မှု နဲ့ ဘဝကို
သာယာနာပျော်ဖွယ် ဖြတ်သန်းမှု တို့နဲ့လည်း ဆိုင်ပါသတဲ့ လေ။(သူတို့ဆီက အယူအဆ)
Starbucks ဟာ အစိမ်းရောင် အဓိက ထားသုံးပြီး အလယ်ခေါင်မှာ ရေသူမ ပုံ သုံးတဲ့ ငယ်ရွယ်ပျိုမြစ်မှု
ကမာ္ဘမြေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု ကို အားပြုထားတဲ့ Brand ဖြစ်ပါတယ်။ Starbucks ဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုတွေ နဲ့ fair trade တွေအတွက်အမြဲတစေ ဂုဏ်ယူစရာ Brandတခု ဖြစ်
နေပါတယ်။ Garnier Fructis ဟာလည်း နောက်ထပ် အစိမ်းရောင် အားပြုသုံးတဲ့ shampoos တွေကို
ထုတ်လုပ်တဲ့ Brand တခုဖြစ်ပါတယ်။ (The Body Shop ကလည်း အစိမ်းရောင် ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ.)
အစိမ်းရောင်နဲ့ ပါတ်သတ်လို့ ကျနော့် ကိုယ်ပိုင်အမြင် (သတိထားမိတာ) ကတော့ ၃ခုရှိပါတယ်။
ပထမတခုကတော့ အနောက်တိုင်း ဒဏ္ဍာရီလာ လေးပစ် အင်မတန်ကောင်းတဲ့ တောတွင်းပျော်
Elf တွေ နဲ့ သူတို့ ကို လူအသွင် ဖန်တီးထားတဲ့ ဇာတ်ကောင် Robin Hood တို့ပါပဲ ။
သစ်တော စိမ်းစိုမှု သဘာဝ ဒါတွေကို ကိုယ်စားပြုထားတာပါပဲ။
နောက်ထပ် သတိထားမိတဲ့ တခုကတော့ ပြည်တွင်း က အစိမ်းရောင်နဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ အမြင်ပါ။
ခုနောက်ပိုင်းမှုသာ အစိမ်းရောင်ကို လူတွေက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့ Recycling တို့နဲ့
တွဲပြီး (အကောင်းမြင်) မြင်လာခဲ့တာပါ။ အရင်ကတော့ အစိမ်း ဟေ့ လို့ ဆိုလိုက်ရင်
စိမ်းကားမှု နဲ့ တွဲမြင်နေတတ်ပါတယ်။ သစ်စိမ်းချိုး ၊ သွေးစိမ်းရှင်ရှင် ၊ အစိမ်းလိုက် ၊ အစိမ်းသက်သက်
ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ တွဲလိုက်တဲ့အခါ အစိမ်း ဆိုတာ ရုပ်ချည်းပြောင်းလဲတတ်သော ဆိုတဲ့
အဓိပ္ပါယ် ထွက်နေတတ်ပါတယ်။ သည်တော့ .. ပြည်တွင်း Brand တွေအနေနဲ့ အစိမ်းကို
သုံးမယ် ဆိုရင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ ထုတ်ကုန်မဟုတ်ရင်တော့ ရှောင်ရှားသင့်ပါကြောင်း။
တတိယ တစ်ခုကတော့ အစိမ်းရောင် နဲ့ ဆေးပညာ ပါ..။ အစိမ်းရောင်ရဲ့ ပင်ကိုယ် သဘောဟာ
မျက်စိအေးစေပါတယ်။ ခွဲစိတ်ခန်းဝင် ဝတ်စုံတွေ ဆေးရုံနံရံတွေနဲ့ ခန်းစီး စတာတွေမှာ အစိမ်းကို
သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ မျက်စိအေးတာတကြောင်း၊ သွေးရဲ့ အရောင်ဖြစ်တဲ့ အနီရောင်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်
Brands တွေဟာ အပြာရောင် ကို သုံးပြီး အေးဆေးတည်ငြိမ်မှု နဲ့ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု ၊ ယုတ္တိတန်မှု ကို ပေးပါတယ်
အပြာရောင်ဟာ ယုံကြည်မှု၊ ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှု နဲ့ ဆက်သွယ်မှု ဆက်စပ်မှု တို့ရဲ့ ပြယုဂ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် tone မှားယွင်းအသုံးပြုခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ဖြင့် အေးစက်မှု၊ သီးသန့် ဆန်မှု ၊ မာကျောပြီး
မသင့်မလျှော်မှု တခုခု ကို ဖော်ပြသလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အပြာရောင်ဟာ ကျယ်ပြောလှတဲ့ ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့ ကိုယ်စားပြုအရောင် ဖြစ်တာမို့ ကူးလူးဆက်သွယ်ခြင်း
ဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိလည်း ရှိပြန်ပါသတဲ့ ။
ကမာ္ဘ့ လူမှု ကွန်ရက် ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Facebook, Twitter, LinkedIn တို့ဟာ အပြာရောင်ကို အဓိက brand
Color အဖြစ် သုံးကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Twitter ရဲ့ အပြာရောင် အဖျော့ဟာ လူမှုကွန်ရက်ရဲ့ ပျော်ရွှင်
နှစ်လိုဖွယ် ကောင်းမှု ကို ဖော်ပြနေပါတယ်။ နောက်ထပ် ထင်ရှားတာကတော့ Tiffany & Co. ရဲ့
ကမာ္ဘကျော် Tiffany Blue ဒါမှမဟုတ် teal blue ပါပဲ ။
Hex triplet #81D8D0
sRGBB (r, g, b) (129, 216, 208)
HSV (h, s, v) (174°, 40%, 85%)
(အဲ့အရောင် သိတယ်မလား …ဟိုသာထိန်းဂျီး ပိုင်တဲ့ အဲဇလုံ ဆိုလား ..အဲ့မှာ သုံးတယ်လေ..)
အပြာရောင် နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ကိုယ်ပိုင် အမြင် ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ ..
ပထမဆုံး ကျနော် Nokia ကို ပြေးမြင်မိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Brand color ဟာ
အပြာရောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အပြာရောင်ရဲ့ အပြောကျယ်ပြီး ကူးလူးဆက်ဆံရေး ဂုဏ်သတ္တိကို
အသုံးချထားတာ လို့ မြင်မိပါရဲ့ .. နောက်တခု ထပ်ပြောနိုင်တာကတော့ Samsung ပါ။
အပြာရောင်ဟာ ယုံကြည်မှု ကိုကိုယ်စားပြုတယ် ဆိုလို့ Business Color အနေနဲ့လည်း သုံးစွဲကြပါတယ်။
ဒီထဲကမှ IBM ဟာ ထင်ရှားတဲ့ ဥပမာ ဖြစ်ပါတယ်။ Brand တွေမှ မဟုတ်ပါဘူး .. အဖြူမှာ အပြာ ဒါမှမဟုတ် အပြာပေါ်မှာ အဖြူပါတဲ့ ရှပ် အကျင်္ီတွေဟာ Standard
Business man Shirts တွေလို့
အပြာရောင်ကို နောက်တမျိုး Blue for Boy ဆိုပြီး ဆိုတတ်ကြပါသေးတယ်။ အမျိုးသား ကိုယ်စားပြု
အရောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို နိုင်ငံတကာက အိမ်သာ ဆိုင်းဘုတ်တွေမှာ အထင်အရှား တွေ့နိုင်ပါရဲ့။
ဒီသဘောတရား နဲ့ Brand color ကို ချိန်ဆ ယူတာကတော့ Nivea ပါပဲ။ မူလ Brand color ဟာ
အပြာရောင် ဖြစ်တဲ့အပြင် Nivea for Men မှာ အပြာရောင်ကို အလွန်အမင်း ကို ထင်ရှားအောင်
သုံးစွဲလေ့ရှိတာ Nivea ရဲ့ ထုံးစံဖြစ်ပါတယ်။
(တခြား ရှော့ရှိတဲ့ အပြာ အကြောင်းကိုတော့ ချန်ထားခဲ့ပါတယ်….အဟိ… ကိုဆာမိရဲ့ အရိန္မာလှံ ကြီးကြောက်လို့)
Brands တွေဟာ ခရမ်းရောင် ကို ဇိမ်ခံပစ္စည်းဆန်မှု နဲ့ မှော်ဆန်မှုကို ပေးချင်တဲ့အခါ သုံးပါသတဲ့
ခရမ်းရောင်ဟာ အဆင့်အတန်းမြင့်မားမှု ဇိမ်ခံပစ္စည်းဆန်မှု နဲ့ မှော်ဆန်မှု ထူးခြားဆန်းပြားမှု တို့ကို
ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် တခါတရံမှာ ခရမ်းရောင်သုံးစွဲမှုဟာ သိမ်မွေ့ ရှုပ်ထွေးသွားပြီး reality နဲ့
ကင်းကွာသယောင် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ပေးချင်တဲ့ message ကိုလိုက်ပြီး
သတိနဲ့ သုံးစွဲသင့်တဲ့ အရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
Cadbury’s ရဲ့ trademark ခရမ်းရောင်ဟာ ကြွယ်ဝတဲ့ ချောကလက် ထုတ်ကုန်တွေကို
ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ Pop အဆိုကျော် Prince ဟာလည်း ခရမ်းရောင် ကိုနှစ်သက်စွာ အသုံးပြုမှုအတွက်
ခရမ်းရောင်နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး မှတ်ဖူးတာတခုကတော့ သူ့မှာ အစာစားလိုစိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့
သတ္တိ ကိန်းပါသတဲ့ သည်တော့ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ စားပွဲခင်းအနေနဲ့ သုံးကြပါတယ်တဲ့ ..။
ခရမ်းရောင် ကို အသုံးများတဲ့ တိုင်းပြည်ကတော့ အိမ်နီးချင်း ယိုးဒယားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ နေရှင်နယ် ပန်းဆန်ဆန် သုံးနေတဲ့ သစ်ခွကလည်း အနှီ အရောင်ပေပဲကိုး .။
ယိုးဒယားဆိုလို့ တိုက်ဆိုင်လို့ပါ။ အဲ့သည့်မှာ နေ့တွေမှာ အရောင်တွေ ရှိပါသတဲ့။
လက်ရှိဘုရင်ကတော့ အဝါရောင် ကိုယ်စားပြုတဲ့ တနင်္လာသား မို့ သူ့မွေးနေ့ဆိုရင်
စကားလမ်းကြောင်းချော်ကုန်ပြီ ခရမ်းရောင်အကြောင်းမို့ ခရမ်းရောင်နဲ့ ပြန်ပိတ်ရရင်ဖြင့်
အနုပညာသယ်တွေရဲ့ နှစ်သက်မှုအခံရဆုံး အရောင်ဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်ဗျာ။
Brands တွေဟာ သီးသန့်ဖြစ်တည်မှုနဲ့ မက်မောစွဲလမ်းမှု ကိုပေးလိုတဲ့အခါ အမည်းရောင် ကို သုံးကြပါတယ်။
ခရမ်းရောင်လိုပါပဲ ။ အမည်းရောင်ဟာလည်း ဇိမ်ခံပစ္စည်းဆန်တဲ့ သွင်ပြင် ရှိပါတယ်။
အမည်းရောင်ကို မှန်ကန်စွာ အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင် စွဲလမ်းနှစ်ခြိုက်စရာကောင်းတဲ့ သီးသန့်ဆန်တဲ့
အဆင့်အတန်းမြင့်မားပုံရတဲ့ အသွင် ဆောင်ပြန်ပါတယ်။
စူးစူးနစ်နစ် လေ့လာဖို့ကောင်းတဲ့ အရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
Gilt Groupe ကတော့ အမည်းရောင်နဲ့ ရွှေရောင် တွဲဖက် သုံးစွဲမှု ကို အလွန်အင်မတန် သီးသန့်ဖြစ်
Chanel နဲ့ Yves Saint Laurent တို့ဟာ အမည်းရောင်ကို ထင်ရှားစွာသုံးတဲ့ Brand
ကိုယ်ပိုင်အမြင် အရ ပြည်တွင်းမှာတော့ အမည်းရောင်ကို အမင်္ဂလာအရောင်အဖြစ် ယူဆကြသူများလို့
အမည်းရောင်ဟာလည်း သတိနဲ့ သုံးသင့်တဲ့အရောင်ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ သီးသန့်ဆန်မှုကိုတော့
Brands တွေဟာ ပျော်ရွှင်မှု နဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုကို ပေးချင်ရင် အဝါရောင်ကို သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
အဝါရောင်ကိုသုံးထားတဲ့ Brands တွေဟာ ပျော်ရွှင်မှု၊ အကောင်းမြင်စိတ် နဲ့ ရင်းနှီးပွင့်လင်းမှု ကို ပေးပါသတဲ့။
နေ့အလင်းရောင်ထဲမှာ ထင်သာမြင်သာအရှိဆုံး အရောင်ဟာ အဝါ ဖြစ်ပါတယ်။ သည်တော့ အဝါသုံးပြီး
ရေးထားတဲ့ Logo တွေကို မျက်လုံးက ရှောင်ကွင်းသွားဖို့ သိပ်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါ။
ဒီအချက်ကို ကောင်းကောင်းသိထားတာကတော့ McDonald’s ပါပဲ။
ဆိုင်ရဲ့ ခေါင်မိုးပေါ်မှာ မြှင့်တင်ထားတဲ့ ‘M’ ဆိုတဲ့ စာလုံးကိုကြည့်ကြည့်ရင် နောက်ခံ အပြာရောင်မိုးသား
ကောင်းကင်နဲ့အတူ ထင်ရှားပေါ်လွင်နေလေ့ ရှိပါတယ်။
IKEA ဟာလည်း နောက်ထပ် အဝါရောင်အသုံးပြုမှုရဲ့ ဥပမာကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူလည်း ပဏာရတဲ့
အတွဲအစပ်ဖြစ်တဲ့ အဝါနဲ့ အပြာကို တွဲသုံးထားပါရဲ့.
ဗုဒ္ဓဘာသာ မှာတော့ သာသနာ့ အရောင်အဖြစ် အဝါကို လက်ခံထားကြပါတယ်။
သာသနာ့အလံမှာပါတဲ့ အဝါ ဝီကီကတော့ သည်လို ဆိုလေရဲ့…။
Yellow (Pīta): The Middle Path – avoiding extremes, emptiness
နောက်ပြီး ရာဇ အရောင်လို့လည်း ဆိုနိုင်မလား။ လူမျိုးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ..(ကိုယ်တို့ ရွှေတွေက)
မြန်မာ့ ကိုယ်စားပြု ပန်းလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ ပိတောက်ရဲ့ အရောင်လည်း ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။
သည်တော့ ပြည်တွင်း အဝါရောင် သုံးစွဲမှု နဲ့ ပါတ်သတ်ရင်တော့
အနောက်တိုင်းနဲ့ အရှေ့တိုင်း သတ်မှတ်ပုံစံ ကွာခြားလေတော့ ..
အင်း …. ဂရုစိုက်သုံးမှ တော်ကာကျမယ့် အရောင်ဗျို့ …
Brands တွေဟာ ဆော့ကစားမှု နဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုအတွက်
လိမ္မော်ရောင်ဟာ အင်အားကောင်းပြီး ပြင်းပြပါတယ်။
ပျော်ရွှင်မှု ၊ ဆော့ကစားမှု နဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အရောင်မို့ အဝါရောင်နဲ့ အတော်အတန်
ကလေး TV network တခုဖြစ်တဲ့ Nickelodeon ဟာ လိမ္မော်ရောင် ရေစက်ပုံ logo ကိုအသုံးပြုပါတယ်။
ဒါဟာ သူတို့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီး ကလေးတွေကို ပျော်ရွှင်မှု တောက်ပမှု ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့
Financial institution တခုဖြစ်တဲ့ ING ကလည်း လိမ္မော်ရောင် ကိုအပြာနဲ့ တွဲသုံးတာ ထင်ရှားပါတယ်။
ရှုပ်ထွေးပွေလီလှတဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းပိုင်းတွေကနေ ပေါ့ပါးမှု သက်သာမှု ပေးတယ် ယူဆပါရဲ့ ။
လိမ္မော်ရောင်ကိုတော့ .ပြည်တွင်း brand တွေအတွက် အဝါရောင်အစားထိုး အသုံးချစရာ အရောင်အဖြစ်
Brands တွေဟာ ချိုမြိန်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွဲဆောင်မှု ပြင်းပြမှု ကို ပြချင်ရင်
ပန်းရောင်ကို သုံးလေ့ ရှိပါတယ်။
ပန်းရောင်ဟာ အရည်အသွေးအချို့ကို ထင်ထင်ရှားရှားပြသတဲ့ အရောင်ဆိုရင်
မမှားပါဘူး။ အမျိုးသမီး ကိုယ်စားပြုတဲ့ အရောင်ဖြစ်ပြီး ချစ်မေတ္တာ ၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု နဲ့
ဂရုစိုက်မှု တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ တောက်ပတဲ့ ပန်းရောင်ကို မိန်းကလေးတွေကို
အဓိကထားပြီး marketing လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ sex appeal အားကောင်းလို့ပါ။
Victoria’s secret ဟာ ပန်းရောင် Brand နဲ့ပါတ်သတ်ရင် အထင်ရှားဆုံးသော
ဥပမာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာ PINK လို့ ရိုးရှင်းစွာ နာမည်ပေးထားတဲ့ Product Line
ရင်သားကင်ဆာ အတွက် အလှူပွဲ ရန်ပုံငွေပွဲတွေ လုပ်တဲ့အခါ ပန်းရောင်ကို ကိုယ်စားပြု
အရောင်အဖြစ် Brand တွေက သုံးစွဲလေ့ရှိပါတယ်။
Breast Cancer Awareness month မှာ ပန်းရောင် ခေါင်းစီးကြိုးလေးတွေကို
အထိန်းအမှတ် ပြု လေ့ရှိပါသေးသတဲ့။
ဒါကတော့ Avon ရဲ့ Breast Cancer အတွက် Campaign ပါ။
ပန်းရောင်နဲ့ ပါတ်သတ်တဲ ့ကျနော့်အမြင်ကတော့ အမျိုးသမီး ထုတ်ကုန် တိုင်းအတွက်
လုံးဝ ကင်းလို့မရမယ့် အရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပင်မ logo မှာ မသုံးရင်တောင် Packaging
ပိုင်းမှာ သုံးသင့်တဲ့ အရောင် ဖြစ်ပါရဲ့
ပုရိသအကြိုက် ဟိုမဂ္ဂဇင်းတွေမှာလည်း ပန်းရောင်ကို လှိုင်လှိုင်သုံးတာ သတိထားမိပြန်ပါသေးတယ်။
အကြောင်းကတော့ ပုရိသ အကြိုက်ဟာ က္ကုထ္ထိယ မို့ ..စာအုပ်ကိုယ်တိုင် ကိုက က္ကုထ္ထိယ ဆန်နေဖို့
လိုအပ်လို့ပါပဲ။ (ဝါသနာရှင် ထင်မှာစိုးလို့ ဒီကိစ္စတော့ တော်သေးဘီ)
ပန်းရောင် ရှိတဲ့ အရာတခုခုနဲ့ ယောက်ျားဘသားတွေကို ဆက်စပ်ပေးထားတဲ့ ထူးခြားတဲ့ နိုင်ငံကတော့
ဂျပန်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ နွေဦးကာလမှာ တပင်လုံးဝေအောင်ပွင့်ပြီး အကုန်လုံး ကြွေကျရတဲ့ ပန်းရောင်
ချယ်ရီ ပန်းတွေနဲ့ စစ်သားတွေကို ဆက်စပ်ပေးထားတာပါ။ ဒါဟာကမာ္ဘစစ် တုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ စိတ်ဓါတ်
စစ်ဆင်ရေး propaganda ပါ။ စစ်မြေပြင်မှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ မျိုးချစ်စစ်သားတွေအတွက် ဂုဏ်ပြုပြီး ပွင့်တဲ့
ပန်းတွေပါတဲ့ …။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ တပင်လုံးပွင့်ပြီး ကြွေသလို တပြုံလုံး သေကြတာကတော့ အနိဌာရုံပါဗျာ။
Brands တွေဟာ နွေးထွေးမှု ၊ စားသုံးသူရဲ့ မှီခိုအားထားနိုင်မှု ရရှိကြောင်း
ပြသချင်တဲ့အခါ အညိုရောင် ကို သုံးပါတယ်။
အညိုရောင်ရယ်လို့ တွေးလိုက်တာနဲ့ ထိပ်ဆုံး ပုံဖော်မိမှာက Chocolate ဖြစ်ပါတယ်။
အနှီ အတွေးကို ပိုမို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း တွေးရင်တော့ နွေးထွေးမှု ၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့ အားကိုးနိုင်ဖွယ်ကောင်းမှု
UPS ဟာ အညိုရောင်သုံးတဲ့ နေရာမှာ ထင်ရှားတဲ့ brand တခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဖောက်သည်တွေရဲ့
ချောစာတွေနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို သယ်ယူပို့ဆောင် ပေးတဲ့နေရာမှာ ယုံကြည်ကိုးစားဖွယ်ရာ ကောင်းမှုကို
အညိုရောင်နဲ့ ပုံဖော်တဲ့ သဘောပါ။ဒါဟာ Service Sector ထဲက Firm တွေအတွက် အလွန်သင့်လျှော်တဲ့
အရောင်ရွေးချယ်မှု ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုထားပါတယ်။ နောက်ပြီး ထင်ရှားတဲ့ အညိုရောင် သုံးတဲ့ Brand ကတော့
ချောကလက်လေးတွေ တန်းစီတဲ့ M&Ms ပါပဲ ။ အများနဲ့ မတူ ထူးခြားခြားနားတဲ့ အညိုရောင် ပါကင်နဲ့အတူ
နွေးထွေးချိုမြိန်တဲ့ ချောကလက်ရဲ့ အရသာကို ခံစားရစေတဲ့ အသွင်အပြင်ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ကတော့ ကျနော့်အမြင် ဖြစ်ပါတယ် ။
တခြား အညိုရောင် များများသုံးတာကတော့ နာမည်ကျော် Louis Vuitton ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ ပြည်တွင်းမှာတော့ ညိုတာရဲ့ နောက်မှာ မှိုင်းတာက ပါဝင်လာတဲ့ ခံစားချက်မျိုး
လက်ခံထားကြတာမို့ လုပ်ငန်းတွေဟာ အညိုရောင်ကို အခြားအရောင်တွေနဲ့
ယှဉ်ရင် သိပ်သုံးတာ မတွေ့မိသေးပါ။
အောက်ဆုံးမှာ ပြောခဲ့ချင်တာကတော့ ယောက်ျားလေးနဲ့ မိန်းကလေး အရောင်ကို အလေးထားကြည့်ရှု
အပေါ်က အရောင်နဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်တွေကတော့ဖြင့် ဆရာ့ ဂီ အရေး အစဉ်မို့ ပြောစရာမရှိပါ။
မြင်ပဲ မြင်နေရပြီး သိပ် ခေါင်းထဲ မရောက်တဲ့ အကြောင်းအရာမျိုးတွေမို့ ခုလို စီကာစဉ်ကာ ဖတ်လိုက်ရတော့လည်း “ဟုတ်ပေသားပဲ” လို့သာ။ :hee:
နောက်ဆုံး အရောင်တွေကိုမြင်ပုံမြင်နည်းကတော့ “ဟုတ်လိုက်လေ ကျောင်းဒကာရယ်” လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။
ယောင်္ကျားနဲ့ မိန်းမ အရောင်အမြင် အတော်ကွာတယ်ပဲ ပြောရမယ်။
ငြင်းရတာလည်း ခဏ ခဏပဲ။ ကြာတော့ သူတို့ကို ကာလာ ဘလိုင်းလားမှတ်ခဲ့မိတာ။
ခုလို သိလိုက်ရတော့မှ ပဲ ခွင့်လွှတ်ဖို့ ကြိုးစားရတော့မယ်။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ထက် အရောင် အသေးစိတ်တဲ့ သူမျိုးကိုဖြင့် တစ်ယောက်တော့ တွေ့ဖူးရဲ့။
အဆင်းမှာ အရောင်တွေရှိသလို အသံမှာလည်း အရောင်တွေရှိသတဲ့ ..
အသံဖက်က အရောင်တွေက ပိုလို့ သိမ်မွေ့တယ် ပြောရမယ်…
နား နဲ့ မြင် အောင်နားထောင်ရတာကိုး …။
သူများတွေတော့ အသံကိုတောင် ဒီဇိုင်း လုပ်ပါသတဲ့ …
အဲ့ဒါတွေနဲ့ ဘယ်လောက်တောင်များ နှိပ်စက်အုံးမယ် ဦးနှောက်ဆေးဦးမယ် မသိတော့
မတွေးမိ… မသိမိတာတွေ သိရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါတော်…
မမကတော့ အနီ နဲ့ အဝါရောင် ကို အနှစ်သက်ဆုံးတော့……….. :hee:
ဟတ်ကဲ့ ..ကျေးကျေးပါချင့် …
အနီအဝါ ဆိုလို့ ပြောရရင် ဘရန်း နာမည်တော့ မေ့သွားဘီ..ဘရန်းတခုပဲ ဆိုပါစို့ … …
အနီနဲ့ အဝါက စပိန် နိုင်ငံတော်အလံမှာ သုံးတဲ့ အရောင်၂မျိုး
ဆိုတော့ စပိန်က ပြောင်းခိုသူတွေများတဲ့ အမေရိက ဈေးကွက်တခုလုံးကို ထိုးဖောက်ဖို့
လိုဂို နဲ့ ထုတ်ပိုးပုံကို အနီအဝါ စပ် သုံးခဲ့ပါသတဲ့ …။
German အလံကအရောင်အတွဲအစပ်ကို နှစ်သက်တာလေးတစ်ခုကတော့
(ရှားရှားပါးပါး) အကြိုက်ချင်းညီပါရဲ့ဗျာ …
အငြိမ်အရောင်လို့ဆိုမယ်ကွယ်… အဖြူနဲ့အနက်အတွဲပါ… ပန်းသီးရဲ့ Silver & Black လိုမျိုးလေးပေါ့…
နောက်တစ်ခုက နက်ပြာနဲ့ အဝါအတွဲပါ… London သုံးခဲ့ဖူးတဲ့အရောင်လို့ပြောရမပေါ့…
နောက်တစ်ခုကတော့ အဝါရောင်နဲ့ ခရမ်းရောင်အတွဲပေါ့…
လာဗြံဘီ ထစ်ကနဲရှိ ပန်းသီး …
အဲ့လာလေးရောက် ကြိုက်လား ဟင်င်င်င်
အရီး လေး says:
ဟိုးအရင်ပိုစ့် တွေမှာ ဘရမ်းတွေကို
နဲ့ တွဲပြီး မြင်တတ် ကတည်းက
စိတ်ဝင်စားအောင် ရေးတတ်သူ လို့
ရှိသမျှ ပင်မအရောင်တွေ အကုုန်သုုံးထားတဲ့ Google logo နဲ့ Google signature color ကိုုရော ဘယ်လိုု သဘောဆောင်တယ်လိုု့ကြည့်ရမလဲ ဟင်။
Google လား.. သူတို့
Search Engine ထုတ်တယ်
Mail Service ထုတ်တယ်
Video Streaming ထုတ်တယ်
Cloud Service ထုတ်တယ်
Photo Service ထုတ်တယ်
သက်တန့်ကြီးလို အရောင်စုံတယ်ပေါ့ဗျာ.. သူသုံးတာနဲ့ သူပြောချင်တာနဲ့ မှန်ပါတယ်..
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်လည်း ဝါစိမ်းနီပြာ လေးရောင်သုံးပြီး အပျော့ထည်ဟေ့ဆို
ဂိမ်းအစ အော့ဖစ်စ် ဆော့ဖ်ဝဲ အလယ် ဒေတာဘေ့စ်အဆုံး ထုတ်စားနေတာပဲ မဟုတ်လားဗျို့…။
” အောက်ဆုံးမှာ ပြောခဲ့ချင်တာကတော့ ယောက်ျားလေးနဲ့ မိန်းကလေး
အရောင်ကို အလေးထားကြည့်ရှုမှု နှိုင်းယှဉ်ချက်ကလေးပါဗျို့ ”
ဆိုလိုတာက မိန်းကလေးက ၂၉ မျိုး ခွဲမြင်နေတဲ့ အချိန်မှာ ၊
ယောက်ျားလေးက ရ မျိုးပဲ ခွဲမြင်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပေါ့ ။
အရောင်တွေက ဆွဲဆောင်မှု ရှိတာတော့ သိတယ်
ဒါလဲ မားကတ်တင်း တစ်ခုပေါ့လေ
ကာလာတွေကို ရည်ညွှန်းတဲ့ စပက်ဆီဖစ်တားဂက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးလဲ သုံးရမယ်ထင်တယ်။
ကုလားကြိုက် တရုတ်ကြိုက် အမျိုးမျိုးဆိုတော့လေ…။
Demographics အရ အရောင်အသုံးတွေ ကွာရတာလည်း တပုံတပင်ပါ။
တောနဲ့ မြို့လို့ ပြောရင် တောဘက်ဟာ ရှင်းတယ် ဘွင်းတယ် အရောင်တောက်တောက်
ကြိုက်တယ် သုံးတယ်ရယ်ပေါ့။ (Ref: ဦးဖိုးကျား-မိတဆိုးရှင်ပြု)
မြို့ကတော့ အရောင် အငြိမ်တွေ အရောင်အနုတွေ ဖြစ်မပေါ့ ..။
ရွှေပြည်ကြီးမှာ လူမျိုးအရ အကြမ်းဖျဉ်း ခွဲကြတာကတော့ အနီတောက်တောက်ကို စိန အရောင်ဖြစ်ပြီး
အစိမ်းတောက်တောက် ဆိုရင်တော့ အိနိ္ဒယ အရောင် ပါတဲ့ ..။
သူများတိုင်းပြည်တွေမှာ မြို့တည်ထောင်တဲ့ ခေတ်က သုံးခဲ့တဲ့ အလံမှာ ပါတဲ့ အရောင် တို့
လက်ရှိ ဖက်ဒရယ် အစိုးရရဲ့ အလံအရောင်တို့ က အနှီ ဒေသ ကိုယ်စားပြုအရောင်တွေ ဖြစ်လေ့ရှိတတ်သေးသဗျို့..။
စကားစပ်လို့ ပြောရရင် ကျုပ်တို့ဆီက ခရိုနီကြီးတွေ တိုင်းဒေသတွေ ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဘောလုံးအသင်းတွေ ထောင်ကြတော့
အသင်းလိုဂိုတွေ ဂျာစီအရောင်တွေက သူရို့ရဲ့ corporate color တွေ ဖြစ်ကုန်ပါရောလားဗျာ …။
ယန်ကုန်ယူနိုက်တက်တဲ့ … တစ်ဖနီဘလူး နဲ့ ပွဲထွက်လာတယ်…။ အဲ့ဒါ ရန်ကုန်တိုင်း ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အရောင်လား..
အဲဇလုံ ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အရောင်လား ..။ သေချာတာကတော့ ဒီအရောင်ဟာ ရန်ကုန်သားတွေကိုကိုယ်စားပြုတဲ့အရောင်လို့တော့
ဘယ်သူမှ ခံစားရမှာ မဟုတ်တာဘဲ…။ တကယ်လို့များ ပေါ့ဗျာ ..မြန်မာ့လက်ရွေးစဉ်အသင်းအတွက် ကစားသမားကောင်းများ
မွေးထုတ်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ရင်း ဆိုပြီး လက်ရွေးစဉ်အသင်းဝတ်တဲ့ အဖြူရောင်(အနီရောင်) ကို ဝတ်ပါသည် တို့ …
သမိုင်းထက်က ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ပွဲများတွင် ဝတ်စဉ်လေ့ရှိတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း လက်ရွေးစဉ်အသင်း အရောင်ကို ရွေးပါသည်တို့…
ဆိုရင်တော့ တိုင်းဒေသတွင်းက ပရိတ်သတ်တွေကို something communicate လုပ်ယူလို့ရမလားပဲ…။ လက်ရှိတစ်ဖနီ ဘီလူး
စာရေးသူ ရဲ့ ၊
စာဖတ်သူ အပေါ် ထားတဲ့ ၊
ကြီးမားလှတဲ့ စေတနာ နှင့် ၊
ကြိုးစား အားထုတ်မှု ကိုတော့ ၊
မြင်သာ ပါပေတယ် ။
ကျွန်တော်တို. Brand တွေကို ရူးသွပ်ခဲ့ပါတယ်..ဒါပေမယ့် အဲဒီ ဘရင်းန်တွေရဲ. လိုဂိုတွေ ကို အဲဒီလောက်အထိ အရောင် အဓိပ္ပာယ်နဲ. သေသေချာချာမသိခဲ့ပါဘူး….
ကျွန်တော် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် ကိုယ့်ထုတ်ကုန်ကို ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ. ဘာအရောင်သုံးမလဲဆိုတာ စိတ်ထဲ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် ပေါ်လာတွေးမိသွားပါတယ်…
ပြီးတော့ အဲဒီ အရောင်တွေနဲ. ဈေးကွက်ကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင်ရေးပြသွားနိုင်စွမ်းက ဈေးကွက် ထိုးဖောက် တဲ့ အချက်နဲ. ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်နေတဲ့ အချက်ကို သတိထားအတုယူစရာအဖြစ် တင်ပြသွားနိုင်လို. ကြိုက်မိပါတယ်ဗျာ……
ကျွန်တော့ခံစားချက်အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများဟာ မိမိတို့ရဲ့ Brand, Logo စတဲ့ အရာတွေကို သိပ်ပြီးတော့အလေးမထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်… အဲဒီလိုပဲ Logo ကိုတောင်မှ အလေးမထားတတ်ကြတဲ့အတွက် Brand တွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ အရောင်ကိစ္စကတော့ဖြင့် အလှမ်းဝေးနေဆဲပါ… ဒီပိုစ့်မှာ နိုင်ငံတကာရဲ့ အရောင်အသုံးပြုမှုအကြောင်းကို လေ့လာမိသလောက် ပြန်လည်မျှဝေထားသောကြောင့် အလွန်နှစ်သက်မိတဲ့ သုတပိုစ့်တစ်ပုဒ်အဖြစ် ရွေးချင်လိုက်ပါတယ်…
အချို့အရောင်တွေ ဥမပါ – အညိုရောင် ကြတော့လည်း backward tracking ဖြစ်လာမှ နောက်ယောင်ခံလိုက်ပြီး သမုတ်ကြဟန် ရှိတယ် ထင်သဗျာ။ မြန်မာတွေ ဖေးဘရိတ်ကာလာသည် ရွှေရောင်လို့ မှတ်ဖူးတယ်၊ ဒါကြောင် လဒုံစီးကရက် ထွက်တော့ ရွှေရောင်ဗူးခွံ သုံးခဲ့ပါတယ်။ ဘစ်ဇစ်နက်နိမ်းကတ်တွေ ရိုက်တဲ့အခါ ကာလာအရေအတွက် မူတည်ပြီး ကုန်ကြစရိတ် တက်လေ့ရှိလို့ ဈေးသက်သာခြင်ရင် ဝမ်းကာလာနဲ့ပဲ သုံးတယ်၊ အဲဒီမှာ အဖြူခံကတ်ပေါ်မှာ အနက် သို့မဟုတ် အပြာရင့်ရောင် ရွေးကြတာ သတိပြုမိတယ်။
နာ့မောင်ဂလေးက ပညာချင်သာဖြစ်ဖို့ကောင်းတာ.. မိန်းမဒွေ မေ့ထားအေ
ပြန်ဖတ်မိ ကြိုက်တယ်။ မှတ်သွားတယ်။